Quique Setien Macalinka Kooxda Barcelona Ayaa Amaanay Qaab Ciyaareedka Frenkie De Jong? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Quique Setien Macalinka Kooxda Barcelona Ayaa Amaanay Qaab Ciyaareedka Frenkie de Jong?
Tababaraha Barcelona Quique Setien ayaa shaaca ka qaaday inuu ku faraxsan yahay qaabka Frenkie de Jong, laakiin wuxuu sheegay in kooxda LaLiga laga yaabo inay wax badan ka weydiisato ciyaaryahanka khadka dhexe.
De Jong ayaa dhaleeceyn xoog leh kala kulmay qaab ciyaareedkiisa tan iyo markii uu kaga yimid kooxda Ajax lacag gaareysa 75 milyan euro ka hor xilli ciyaareedkaan.
Xiddiga qadka dhexe, kaasoo dhaliyay labo gool isla markaana siiyay seddex caawiye 37 kulan xilli ciyaareedkan, ayaa ciyaaray 90 daqiiqo kulankii ay LaLiga 1-0 kaga badiyeen Real Sociedad sabtidii.
Markii la weydiiyay De Jong ka dib, Setien wuxuu sheegay inuu ku qancay 22 jirka reer Netherlands, “Waxaan u arkaa Frenkie meel wanaagsan,” ayuu ku yidhi shirkiisa jaraa’id.
“Tani kaliya ma quseyso Frenkie, laakiin hadii aad falanqeeyso dhamaan ciyaartoy si aad u faahfaahsan waxaad mar walba arki doontaa waxyaabo qaar oo ciyaartoy gaar ah ay ku horumarin karaan, ama ciyaartoy kasta ayaa saameyn ku leh ciyaarta. Ilaa iyo inta ay tahay go’aan farsamo oo wanaagsan, taasi waa waxa muhiimka ah Taasi waxay mararka qaar dhacdaa halkaas oo go’aanku noqon karo mid khaldan ama aan ahayn.
“Frenkie wax badan ayuu ina siiyaa. Wuxuu naga caawiyaa waxyaabo badan. Waa run in laga yaabo inaan wax yar ka weydiisan karno isaga madaama aan ka dalbanay ciyaartoydeena heer sare, marna ma fududaan marka aad wajaheyso koox sidaan oo kale ah. Ma sameynin Sabtidii.
Astaamaha ciyaartoydeena dhab ahaan looguma talogelin saxaafad aad u sarreysa marka loo barbar dhigo Real Sociedad taasina waa wixii aan la soo dagaallamay iyo markii ay ku guuleysteen inay u ciyaaraan awoodoodii way na siiyeen dhibaato. Laakiin taasi sidoo kale iyaga ayay ku dhacday iyaga.
“Dhamaadka maalinta, guud ahaan waan ku faraxsanahay sida kooxda ay u ciyaareen iyo sida Frenkie u ciyaaray.”
Barcelona ayaa u dhaqaaqday hogaanka LaLiga, labo dhibcood ka sareysa kooxda ay xafiiltamaan ee Real Madrid, kuwaasoo axada booqan doona Real Betis.